China Plastic Wall Formwork orinasa sy mpamatsy |Lianggong
Lianggong Plastic Wall Formwork dia rafitra formwork vaovao vita amin'ny ABS sy fitaratra fibre.Izy io dia manome ny tranokalan'ny tetikasa amin'ny fananganana mety miaraka amin'ny tontonana maivana, noho izany dia mora raisina.Izy io koa dia mitsitsy be ny vidiny raha oharina amin'ny rafitra formwork materialy hafa.
Plastika formwork dia vaovao rafitra formwork vita amin'ny ABS sy fibre vera.Izy io dia manome ny tranokalan'ny tetikasa amin'ny fananganana mety miaraka amin'ny tontonana maivana, noho izany dia mora raisina.
Ny formwork plastika dia mazava ho azy fa manatsara ny fiforonan'ny rindrina, tsanganana ary slabs amin'ny fampiasana singa kely indrindra amin'ny rafitra formwork.
Noho ny fampifanarahana tonga lafatra amin'ny ampahany tsirairay amin'ny rafitra dia ialana ny fivoahan'ny rano na simenitra vao narotsaka avy amin'ny faritra samihafa.Ankoatr'izay, io no rafitra mamonjy asa indrindra satria tsy mora fotsiny ny mametraka sy mampiditra azy, fa maivana ihany koa raha oharina amin'ny rafitra formwork hafa.
Ny akora vita amin'ny endrika hafa (toy ny hazo, vy, aluminium) dia hanana fatiantoka isan-karazany, izay mety hihoatra ny tombontsoany.Ohatra, ny fampiasana hazo dia lafo ary misy fiantraikany lehibe amin'ny tontolo iainana noho ny fandripahana ala.Izy io koa dia mitsitsy be ny vidiny raha oharina amin'ny rafitra formwork materialy hafa.
Tsy tafiditra ao anatin'izany ny fitaovana, ny mpamorona anay dia nifantoka tamin'ny fiantohana fa mora karakaraina sy azon'ny mpampiasa ny rafitra formwork.Na ireo mpandraharaha tsy dia za-draharaha amin'ny rafitra formwork aza dia afaka miasa tsara amin'ny formwork plastika.
Ny plastika formwork dia azo ovaina, ankoatra ny fampihenana ny fotoana fanodinana sy ny fanatsarana ny tondro azo ampiasaina, dia sariaka ihany koa ny tontolo iainana.
Ankoatr'izay, ny plastika plastika dia azo sasana mora amin'ny rano aorian'ny fampiasana azy.Raha tapaka noho ny fikarakarana tsy ara-dalàna, dia azo fehezina amin'ny basy mafana misy tsindry ambany.
Anaran'ny vokatra Rindrina vita amin'ny plastika
Habe mahazatra Panels: 600 * 1800mm, 500 * 1800mm, 600 * 1200mm, 1200 * 1500mm, 550 * 600mm, 500 * 600mm, 25mm * 600mm ary sns.
Accessories Tantana hidin-trano, tady fatorana, voanjo tie rod, waler nohamafisina, prop azo amboarina, sns...
tolotra Afaka manome anao drafitry ny vidiny mety sy drafitra drafitra araka ny sarin'ny rafitrao izahay!
* Fametrahana tsotra & mora deassembly.
* Mora misaraka amin'ny simenitra, tsy mila mpanavotra.
* Maivana sy azo antoka horaisina, mora fanadiovana ary tena matanjaka.
* Azo ampiasaina sy averina in-100 mahery ny fanamboarana plastika.
* Mahazaka tsindry simenitra vaovao hatramin'ny 60KN/sqm miaraka amin'ny fanamafisana araka ny tokony ho izy
* Afaka manolotra fanohanana serivisy momba ny injeniera amin'ny tranokala izahay.
teo aloha: H20 Timber Beam Formwork
Manaraka: Ringlock Scaffolding